Qaar ka mid ah Ardayda Soomaaliyeed ee Masar oo lacagtiii ay ku gateen deeqaha waxbrasho dib loogu celiyay.
Iyadoo ay socdaan imtixaandii billaha ahaa ee u socday ardayda Jaamacadaha, ayaa ardyada Soomaaiyeed ee Masar waxaa soo wajahaya cabsi hor leh oo ku saabsan deeqaha waxbarasho ee laga helo dowladda Masar.
Sanadkii hore ayaa in ka badan 200 Arday oo Soomaali ah oo wax ka barta Jaamacadaha kala duwan ee Masar waxaa lagu wargiliyay in ay ka gubatay deeqdii waxbrasho ee ay dowladda Masar ugu tala gashay dowladda Soomaaliya.
Wasaaradda waxbarashada ee Masar, xafiiskeeda u qaabilsan ardayda ajaanibta ah, gaar ahaan kuwa Soomaaliya ayaa arinatn la socdosiisay maamulka ardayda Soomaaliyeed ee Masar. Arintaan oo naxdin iyo filan waa ku noqotay ardayda iyo waalidoontooda ayaa Safaaradda beenisay. Haatan, waxaa soo if baxaaay warar la isla dhex marayo magaalada oo sheegaya in qaar ka mid ah Ardaydii sanadka hore minxadii gubatay laga iibsaday loo celiyay lacagahooda; iyadoo ay wali jiraan tira badan oo arydaydaasi ka mid ah oo wali rajo ku nooleyaal ah. Hooyo magaceeda ku soo gaabisay Maryan oo aan kula kulanay albaabka safaaradda ayaa noo sheegtay in loo diiday in ay u gudubto gudaha si ay ula kulanto mas'uul ay sheegtay in uu sanadkii hore ka qaatay lacag 5000$(Shan kun oo doolar) ah, isagaoo ka ballan qaaday in gabadheeda uu siinaayo minxo kulliyada caafimaadka ah; laakin nadiib darro gabdheedii jaamacadda laga soo eryay, minxo la'aan.
Isbuucan gudahiisa waxaa wadanka ka ambabaxay 100 arday oo Soomaali ah oo deeq waxbarasho ka helay wadanka Suudaaan. Masar ayaa iyada ballan qaaday 200 oo boos waxbarasho, laakin nasiib darro qaabka lagu bixiyo deeqda waxbarasho ayaa ah qaab aan caddeyn, iyo waliba iyadoo arintaasi u qaabilsanaa safaardda nin lagu yaqaano in uu yahay mukhalas caan ah; waana arinta keentay in ay minaxadii sanadkii hore ka gubato umadda Soomaaliyeed.
Aqoonyahan Soomaaliyeed oo Masar deggan ayaa wuxuu Dayniile u sheegay in qiimaha fyrsadda waxbrasho ee Soomaaliya ka qasaartay sanadkii hore lagu qayaaso 2,400,000$(Laba malyan iyo Afar Boqol oo Kun) oo doolarka mareekanka ah.
Hadaba, aryda iyo waalidiinta ayaa waxa ay weydiinayaan cidda iska leh mas'uuliyadda qasaaraha intaas la eg? Yaase la xisaabtamaaya cidda arintan mas'uulka ka ah?
Waa su'aalo jawaab u baahan.